Umphakathi wase #PorElClima unezinhlangano ezingaphezu kuka-700 | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Indlela engcono yokuvimbela isimo sethu samanje ukuthi singabi sibi kakhulu ngokwenza isenzo. Kusenabantu abaningi ababheka ukuthi ukuguquguquka kwesimo sezulu njengamanje akuyona into engaphezu kwesikrini sokubhema esivimbela ukugxila kwezinye izingqinamba abazibona zibaluleke kakhulu, kepha iqiniso ukuthi imininingwane ikhona, ingafinyeleleka kubo bonke, nokuthi leyo datha ikhombisa lokho izinga lokushisa eliphakathi komhlaba belilokhu lenyuka kusukela ngeMboni Yezinguquko.
Ngakho-ke, Izinhlangano ezingaphezu kuka-700 sezivele zijoyine umphakathi wase #PorElClima. Umphakathi ovele ekupheleni konyaka odlule ngenhloso eyodwa yokuqwashisa nokwenza iSpain inciphise ukukhishwa kwegesi engcolisa ukushisa okungenani ngo-26%.
Ngamunye wethu angenza izinto eziningi ukufaka isandla ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu. Izenzo ezilula njengokucima isibani njalo lapho sibona kahle ngaphandle kwaso, ukungasebenzisi izimoto kakhulu ukuzulazula, noma ukuvuselela konke esingakwenza, kungezinye zeziphakamiso zomphakathi #Ngenxa yesimo sezulu. Kepha kunezingaphezu kuka-150 ezihlukaniswe izindawo eziyisithupha: ukusetshenziswa, ukutshalwa kwezimali, i-carbon footprint, ukuhamba, ukuphathwa kwemfucuza nokuvimbela. Uma ungacabanga eyodwa, ungangeza ukuze abanye bakwazi ukuyifeza.
Ngaphezu kwalokho, ungawabelana ngamanethiwekhi okuxhumana nabantu, ngaleyo ndlela usize ukwakha ukuqwashisa phakathi kwabangane bakho noma abalandeli bakho. Lapho sikhona, kuzoba lula ukuthi iSpain inciphise ukukhishwa kwamagesi abamba ukushisa.
Lesi sinyathelo sikhuthazwa yiSpain Office for Climate Change (OECC), Biodiversity Foundation of the Ministry of Agriculture and Fisheries, Food and Environment (Mapama), Spanish Green Growth Group, Spanish Network ye-United Nations Global Compact, Red Cross, SeoBirdLife , WWF, kanye ne-Ecology and Development Foundation (ECODES).
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Umphakathi wase #PorElClima ungeza ngaphezu kwama-700 entities ukunqanda ukuguquka kwesimo sezulu